Apple Music dia hifanaraka amin'ny Chromecast | Androidsis
Mpanjakan'ny serivisy fitaterana mozika ary hijanona mandritra ny fotoana maharitra Spotify, serivisy fandefasana mozika voalohany izay tsy vitan'ny hoe nanjary malaza, fa nampihena ny tahan'ny piraty mozika ihany koa, toy ny varotra nentim-paharazana na fivarotana CD.
Amin'ny laharana faharoa dia ahitantsika ny serivisy mozika streaming Apple, Apple Music, miaraka amina mpanjifa efa ho 50 tapitrisa, ho an'ny 97 tapitrisa Spotify. Ny ankamaroan'ny mpanjifa Apple Music, izy ireo dia avy amin'ny mpampiasa ny tontolo iainana Apple ary amin'ny faritra ambany kokoa amin'ny Android.
Hatramin'ny nanombohany, na inona na inona fahombiazana na tsy ananan'ny fampiharana, dia manavao izany hatrany ry zalahy avy ao Cupertino, manampy ireo fiasa mitovy amin'ny hitantsika ao amin'ny kinova iOS. Ny fampiasa manaraka izay horaisin'ny serivisy mozika streaming an'i Apple dia ny mifanentana amin'ny Chromecast, mba ankafizo ny serivisy mozika streaming an'i Apple amin'ny mpandahateny mifandray amintsika.
Apple Music dia mifanaraka amin'ny Chromebooks ankehitriny
Ny fampifanarahana amin'ny Chromecast dia singa iray izay tsy maintsy ho tonga na ho ela, nanomboka izao, Ireo mpampiasa iOS irery ihany no mahay mandefa ny atiny Apple Music ho an'ireo mpandaha-teny marani-tsaina.
Araka ny filazan'ireo tovolahy avy amin'ny 9to5Google, ny kaody ho an'ny kinova 2.8 an'ny Apple Music, izay misy ao amin'ny Play Store amin'izao fotoana izao, dia manome andalana samihafa azontsika atao fantaro ny fomba hanohanana ity fampiharana ity miaraka amin'ny Google's Chromecast, Apple's AirPlay.
Rehefa misy io fampiasa io dia afaka mihaino ny mozika tiany ny mpampiasa Android Apple Music amin'ny mpandahateny Google Home, Smart Display, Android TV na Chromecast. Miankina amin'ny fampiharana azy, tokony ho afaka mampiasa ny fampiharana Apple Music ianao hifehezana sy hitantanana ny playback.
Apple Music, tsy toy ny Spotify, dia tsy manome anay kinova maimaimpoana, ary tsy afaka mampiasa azy io afa-tsy izahay raha manana famandrihana voaloa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Apple Music dia hifanaraka amin'ny Chromecast
Ny Fortnite's Creative Mode dia hahazo ny fiasa andrasana indrindra